Ezempilo: Abesilisa nabo bayaya njalo 'ezinsukwini zabo'
Indoda enolaka - Ulaka olungaqondakali oluhambisana nokudangala kwabesilisa, kuyenziwa wukugula okubizwa nge-Irritable Men Syndrome, okwenziwa wukuncipha kwezinga lehomoni ebalulekile iTestosteroneIsithombe: Black Doctor
Nonhlanhla Shangase | April 29, 2019
ABESIFAZANE uma besezinsukwini zabo, baba nolaka bacasulwe nayizinto ezincane, bazizwe bekhathele futhi bedangele. Konke lokhu kusuke kudalwa wukuphazamiseka kwama-hormone ngalesi sikhathi sokuya esikhathini.
Ongoti bathi akubona abesifazane bodwa abazithola benale nkinga, kodwa nabesilisa njalo ngenyanga kukhona isikhathi lapho beke bazizwe khona benale mizwa.
Bathi kuba nzima ukuqonda ukuthi lokhu kwenziwa yini, yingakho iningi lijwayele ukuzitshela ukuthi licasuka ngoba liyacasulwa noma ukudangala kubangwa yizinkinga nezinselelo owesilia asuke enazo.
“Inkinga ebizwa nge-Irritable Men Syndrome ihlasela inqwaba yamadoda. Okubuhlungu wukuthi abanye ibhebhetheka baze benze umonakalo bengakutholi ukwelashwanokwenza izaba ngayo ngoba iyinto enganakwa nje,” kusho ungoti oseke wenza ucwaningo ngale nkinga yamadoda, uDkt Gerald Lincohn.
I-hormone edume kakhulu emadodeni ngokwenza umsebenzi wokunikeza umdlandla wocansi, wokusiza ukuthi babe yizidlakela uma bejima, ukuzethemba nakho kuqhamuka kula mahomoni nokunye, i-testosterone, iyona futhi okuthi uma yehlile emzimbeni idale izinkinga ezihambisana nolaka olungaqondakali.
Bathi ukwehla kweTestosterone kusuke kudalwa nawukuthi kunezikhathi lapho ikwazi khona ukuziphendula ibe ngolunye uhlobo lwehomoni okuyi-Estrogen.
Lo ngoti uthi izinga lalolu hlobo lwe-hormone lungaqala ukwehla kwabesilisa abaneminyaka eko-30.
Echaza uthi leli hormone liyakwenza ukuthi lishintshe usuku nosuku, ekuseni libe phezulu kuthi ngezikhathi zokulala libe phansi.
Lokhu kugqama kakhulu emadodeni othola ukuthi ekuseni azizwa elangazelela kakhulu ucansi kodwa ebusuku induku ingafuni lutho.
“Kubalulekile kodwa ukusho ukuthi indlela yokwehla nokwenyuka kwale homoni ayifani indoda nendoda,” usho kanje embikweni iHuman Reproductive Science, owacwaninga kabanzi ngalokhu ezilwaneni, okugcine ngokuthi kucwaningwe nakuwona amadoda.
Uthi abantu abazithola besenkingeni, amakhosikazi ahlala nalaba besilisa aze agcine ezitshela ukuthi mhlawumbe obaba banolaka uma beholile (kulabo le nkinga ebahlasela kanye ngenyanga).
Ukwazi ukuthi yini engenza ukuthi i-testosterone yakho yehle yikhona okubalulekile ukulwa nale nkinga uma uzibona ukuthi kungenzeka ukuthi ikuhlasele.
Nazi ezinye izimpawu zale nkinga:
* Wukwehla komdlandla wocansi noma kuthi noma induku ivuka, ibuye ikhophoze usathi usephakathi nomsebenzi.
* Ukuqothuka kwezinwele
* Ukwanda kwamafutha emzimbeni okungaziveza ngokuchicha ebusweni uma uvuka noma ekupheleni kosuku.
* Ukukhukhumala kwezibele, kube sengathi uyahlosa
* Wukukhathala okungaqondakali
* Yimicabango eminingi efika yelakanyana ehlanganisa izinto ezimbi esezike zakwehlela, abantu asebeke bakucasula. Konke kuvuka kube kusha. Lokhu kubizwa wodokotela bengqondo ngokuthi yiBrain Fog.
* Wukucasulwa yinto encane udinwe uthelwe ngamanzi
* Ukuzizwa sengathi awuyinto yalutho noma uyisehluleki
* Ukwehla kokuzethemba, ubone sengathi abantu bakuthatha kancane
Kubalulekile nokho ukwazi ukuthi lezi zimpawu ezingenhla zingahambisana nokhwantalala, yingakho kubalulekile ukuthi uma ubona lolu shintsho usheshe ufune usizo ukuze uyiqonde inkinga yakho.
Okungadala le nkinga:
Ukudla okuthengwa sekuvuthiwe
-Lolu hlobo lokudla lunosawoti oyingozi kule hormone. Ngapphandle kokuthi kwenza umonakalo nasezingeni lembewu yowesilisa (sperm count), kodwa i-sodium etholakala enqwabeni yalolu hlobo lokudla, yehlisa izinga le-testosterone endodeni.
Amafutha okuvamise ukuthi kuphekwe ngawo, i-vegetable oil
-Uhlobo lwamafutha oluhlanganisa nokubizwa nge-polyunsaturated fatty acids kuyalwehlisa izinga.
Ukuphuza ingilazi yewayini uma usuyolala, kuchazwa wodokotela njengento enhle kakhulu emzimbeni womuntu, kodwa ukubhubhuza otshwaleni kuyalehlisa le hormone.
Yingakho abesilisa abaphuza kakhulu begcina belishalazela ikamelo. Kubalulekile nokubalula ukuthi odokotela bathi kwabesifazane utshwala buyalenyusa leli homoni bese belangazelela kakhulu utshwala, kodwa kwabesilisa utshwala buyalona.
-Uke uzwe amakinati esebizwa ngomvusa nkunzi ngenxa yokuthi bukhona ubufakazi bokuthi anomthelela omuhle emizweni yocansi kwabesilisa. Kodwa lukhona uhlobo lwamakinati alehlisayo izinga le-lestosterone kwabesilisa. Ama-walnuts nama-almonds abalwa kulolo hlobo lwamakinati.
Nakhu okunye ukudla ongaqinisa kukhona ukukhuphula izinga leTestosterone:
UVitamin D okulolu hlobo lukafishi wenza omkhulu umsebenzi kulama hormone.
UBISI I-LOW FAT
Nalo lugabe ngawo uVitamin D
Kuyaye kuthiwe abantu abaqinise emkhwepheni eqandeni ngoba lokhu okuphuzi kunyusa iCholesterol, okungamafutha angadingeki emzimbeni, kodwa ngakolunye uhlangothi, okuphuzi eqandeni kungakusiza ukwenyusa leli homoni njengoba kugabe ngemisoco enzulu.
Nalolu hlobo lwenyama kuye kuthiwe alulungile njengoba ukuludla ngokwedlulele kudala iGout emadodeni, kodwa ngaphandle kwalokho, inyama ebomvu inothe ngeZinc edume kakhulu ukwenyusa izinga leTestosterone.